यी बेसहारा बालबलिकालार्इ सहारा दिने कोही हुनुहुन्छ ?
तीतोपाटी डट कम - अभिभावकको मृत्युपछि पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका वडा नं. ७ दैलातुङ्गका दुई बालबालिका सहाराविहिन भएका छन् ।
१५ वर्षीया हेमा बोटे र उनका भाई ११ वर्षीय बुद्धि बोटेले अहिले सहाराबिहिन भएर कष्टकर रुपमा दिनरात गुजार्दै आएका हुन् ।
हेमा शारिरीक रुपले समेत अशक्त छन् । उनी सहज रुपमा हिड्डुल गर्न र बिद्यालय जान समेत सक्दिनन् भने कक्षा १ मा पढ्ने बुद्धि महिनामा एक दुई दिन मात्रै स्कुल जान्छन् । स्थानीय दैलातुङ आधारभुत विद्यालयमा उनीहरुको घरबाट पैदलबाटै केही समयमा नै पुग्न सकिन्छ तर उनीहरुलाई शैक्षिक वातावरणमा रम्न सहज भएको छैन ।
उनीहरुको जन्म दिने आमाको ३ वर्षअघि र बावुको १ वर्ष अघि निधन भएको थियो । बावु आमाको निधनपछि उनीहरु आफ्नै घरमा हजुरआमासँगै बस्दै आएको स्थानीय अगुवा गजविरले बताए । हजुरआमाको पनि ३ महिना अघि निधन भएपछि उनीहरु थप समस्यामा परेका हुन् ।
यसैबीच उनीहरुको अवस्थाबारे थाहा पाएर बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बस्यालले बालबालिकाकोे घरमा पुगेर खाद्यन्न तथा लताकपडा सहयोग गरेका छन् । अहिले यी सहाराविहिन बालबालिकालाई पुनर्थापना गृहको आवश्यक रहेको ईन्सेक पाल्पाका प्रतिनिधि यज्ञमुर्ति तिमिल्सेनाले बताए ।